प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘इन्फेक्सन’ हुने डरले डिस्चार्जमा ढिलाइ
काठमाडौं । गत बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा इन्फेक्सनको मुख्य चुनौती देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई इन्फेक्सन हुने भएकाले अस्पतालको बसाइ लम्बाइएको हो । उनले इन्फेक्सनबाट बचाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आईसीयूमा राखिएको जनाइन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको डिस्चार्ज मिति तय नभएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रत्यारोपणपछि भाइटल तथा ल्याब सूचकहरू अपेक्षाअनुरूप नै सुधार हुँदै गएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले बताए । मिर्गौला दाता समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र समीक्षाले सामान्य रूपमा आहारा लिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै नजिकका व्यक्तिसँग भेटघाट गर्न दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हिँडडुल गराउन र फिजियोथेरापी गराउन थालिएको छ । उनलाई केही दिन हाइडोजको औषधि दिइने उपचारमा संलग्न चिकित्सक बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. प्रेम ज्ञवाली नेतृत्वको समूह खटिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुअघि एक सातामा आफू निको भएर आउने वाचा गरेका थिए । वाचाअनुसारै उनी घर फर्कन चाहे पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकले इन्फेक्सन हुने भन्दै केही दिन अस्पतालमै आराम गर्न आग्रह गरेका हुन् । १२ वर्षअघि प्रधानमन्धी ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार उधारोमा, 'सरकारले तिर्छ वा प्रधानमन्त्री आफैंले?'
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक मिर्गौलापछि शुक्रवार साँझ डिस्चार्ज भएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्री ओलीको फागुन २१ गते मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च भने अनुमानित पाँच छ लाख लागेको अस्पतालले जनाएको छ। उपचार खर्च कसले तिर्ने भन्नेबारेमा निर्णय भइनसकेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक
प्रधानमन्त्री ओली डिस्चार्ज : नियमित फलाे अपमा बस्नुपर्ने
काठमाण्डाै - मृगौला प्रत्यारोपणपछि शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डिस्चार्ज हुनुभएकाे छ। प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार बेलुकी ६:३० बजे अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो । गएकाे फागुन १९ गते अस्पताल भर्ना भइ २१ गते मिर्गाैला प्रत्याराेपण गरिएका प्रधानमन्त्री ओलीकाे स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएपछि ...
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका सबै सूचक सकारात्मक, शुक्रबारसम्ममा डिस्चार्ज हुने
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला दोस्रो पटक प्रत्यारोपण भएको आज (मंगलबार) एक साता भएको छ। गत बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। भाञ्‍जी समीक्षा संग्रौलाले दिएको मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण भएपछि प्रधानमन्त्री ओली एक सातादेखि अस्पतालको आईसीयूमै छन्। प्रधानमन्त्रीको मिर्गौल...
प्रधानमन्त्री पुरै सक्रिय हुन ६ महिनासम्म लाग्छ : चिकित्सक
२७ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अझै केही दिन अस्पतालमा राखिने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा गत बुधबार दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । त्यसका लागि उनी सोमबार नै त्रिवि शिक्षण अस्पताल …
प्रम ओलीको डिस्चार्ज तालिका एक साताको, पाँचौ दिन बित्दा टिचिङका कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, 'टुंगो छैन'
१८ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा नै प्रत्यारोपण हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली भोलि सोमबार नै अस्पताल भर्ना हुनेछन् । त्यसको अघिल्लो दिन आइतबार …
प्रधानमन्त्रीलाई इन्फेक्सनको आशंका, स्लाइन र डायलासिस सँगसँगै
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इन्फेक्सनको आशंका गरिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनलाई इन्फेक्सनको आशंका गरिएपछि सलाइनमार्फत इन्टिबायोटिक चलाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंगलबार साँझ फलोअप र मिर्गौलाको डायलासिसका लागि महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको मनमोहन कार्डियो भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट ...
'बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि खाली गराइएको थियो ग्रान्डीको पार्किङ'
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो पटक डायलसिस गर्ने आज ग्रान्डी अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेको छ। बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ग्रान्डी लैजाने तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको चेकअपका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको र एक्सरे गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए। ओलीलाई शिक्षण अस्पतालको
प्रधानमन्त्री ओली तीन दिनसम्म अस्पतालमै बस्नुपर्ने
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री ओली तीनदिनसम्म अस्पतालमै बस्नुपर्ने भएको छ। छातीमा संक्रमण र शरिरमा चिनीको मात्रा कम भएपछि टिचिङ अस्पताल पुर्‍याइएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई तीन दिनसम्म अस्पतालमै राखिने भएको हो। दशैंलगत्तै बिरामी परेका प्रधानमन्त्री ओली गत शुक्रबारदेखि गम्भिर विरामी परेको प्रधानमन्त्रीको उपचारमा सम्लग्न डा...